UKZN Online Volume: 6 Issue: 43
‘Loluhlelo luhlanganisa abafundi abaneziqu abenza izifundo eziphakeme emikhakheni eyahlukene abavela emhlabeni wonke. Inhloso yokuyisa abafundi kuloluhlelo ukuba bayofunda kabanzi ngezindlela zokuqoqa ucwaningo nokuthi zibe sezingeni lwamanye amazwe, befundiswa ongoti lulomkhakha,’ kusho uPosel.
Abafundi, uNksz Gail Robinson, Mnu Ndumiso Ngidi noNksz Thembalethu Shangase bathe bayabonga kuPosel, ongumhleli wabo wocwaningo, ngokubanikeza imali yokuba bakwazi ukuya kuloluhlelo.
‘Simangele kakhulu ukuthi abanye abafundi basebenza kanzima kanjani enyuvesi. Wonke umuntu uzimisele futhi bayasisebenzisa sonke isikhathi sabo,’ kusho uRobinson.
‘Besingekho isikhathi sokudlala ngoba besinomsebenzi omningi kakhulu, ukufunda nemisebenzi ebekufanele siyihambise. Ngikujabulele kakhulu ukuthi sitshelwe ngokuthi umsebenzi wethu unjani ngalesosikhathi okusenze sazizwa ukuthi bayasikhulisa kanye namakhono ethu.’
Ngaphandle kwamakilasi anzulu nemisebenzi eminingi, abafundi bakwazile ukuthola isikhathi sokuyobuka indawo kubalwa nokuvakashela eNew York ukuyoguba usuku lokuzalwa lukaShangase.
‘Bekunguhambo oluhle kakhulu. Ngiyawathanda ama - quantitative methods nama statistics. Loluhlelo selungifake umfutho wokucwaninga kabanzi, lungisize kakhulu,’ kusho uNgidi.